Sun, Aug 19, 2018 | 13:53:05 NST
कक्षा ८ काे नेपालीको प्रश्नपत्रमा त्रुटि
‘मानिससँग शोच्ने मस्तिस्क र काम गर्ने हाट छन् ।’ भनी सोधिएको सो प्रश्नलाई शुद्ध पार्दा ‘मानिसँग सोच्ने मस्तिष्क र काम गर्ने हात छन् ।’ भनेर शुद्ध पार्नुपर्ने हुन्छ । यसमा ‘शोच्ने’ लाई ‘सोच्ने’, ‘मस्तिस्क’ लाई ‘मस्तिष्क’ र ‘हाट’ लाई ‘हात’ बनाउनु पर्ने हुन्छ बाँकी ०.५ नम्बर कसरी दिने भन्ने पनि रहन्छ । यसरी हेर्दा विद्यार्थीलाई अन्याय गरिनु पक्कै असान्दर्भिक बन्ने नै भयो ।
युरोपेली हस्तक्षेप : हि‌ंसाको आधार भूमि तयार
तिनै युरोपेलीहरूको सहयोग लिएर ‘जनताको वलिदानी जनआन्दोलन र क्रान्ति’ का नाममा नेपाली सत्ता र राष्ट्र विरुद्ध कूकर्म गर्ने यिनै हुन् । ‘लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, अधिकार, समावेसीकरण, आरक्षण’ का आवरणमा राष्ट्र तथा समाज विखण्डन गराउने, जात–जाति, भाषा, धर्म बीच कहिल्यै नरहको फाटो गराएर समाज ध्वस्त पार्ने यिनै हुन् ।
स्थानीय सरकारको समृद्धिको आधार के ?
केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म यसअघि चलि आएको बजेटको नियमितता र सोही तरिकाले अबको अर्थ व्यवस्था चल्छ ? जन निर्वाचित प्रतिनिधि र सरकारले खटाएका कर्मचारीको सेवा सुविधालगायतका विविध खर्चहरु धान्न सक्ला ? यो विषयमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारका रहेर रथ हाँक्ने हाम्रा महारथीहरुको योजना के के होलान् ? के नेपालको संघीय संरचनाको सम्पूर्ण आयश्रोत नागरिकले तिरेको कर मात्रै हो ?
​विमान दुर्घटनामा घाइते पुस्तकको आँखा रसाउँदा...
मेरो होस खुल्दा मसँगै रहेका कोही पनि होसमा थिएनन् । मलाई माया गर्ने, सधैँ साथमा लिएर हिँड्ने उनी थिइनन् । उनका साथी थिएनन् । मलाई माया गर्ने डाक्टरसाब थिएनन् । कोही मुढो चाहिँ ढलिरहेका । कोही अंगार र खरानी बनिसकेका । कोही अलिअलि चलमलाउँदै गरेका ।
विदेशी स्वार्थले विखण्डित नेपाली
पहिलो जनआन्दोलन भन्ने गरिएको, २०४६ सालको परिवर्तन पश्चात हालसम्म नै देश तदर्थमा चलिरहेको छ र हामी अझै संक्रमण कालमै छौँ । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताले त नेपाली राजनीतिलाई थामीनसक्नु अस्थिरताको अवस्थामा पुर्यायो । र यो अस्थिरताको गति अझै रोकिएको छैन ।
‘नक्कली’ प्रमाणपत्रले लग्यो पराजुलीको कुर्सी
मेडिकल माफियाको स्वार्थ र साँठगाँठमा सुनियोजित रुपमा पराजुलीले फैसला सुनाएको भन्दै २०७४ पुस २४ गते चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसी अनसन बस्नुभयो । पछि डा.केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्न माग गर्नुभयो । बिस्तारै प्रधानन्यायाधीशको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद सतहमा आयो ।
वार्डेन सम्मेलन र दार्चुलाको अपेक्षा
भौगोलिक दूरीको बाध्यता त छ नै दार्चुला पुग्नलाई, त्यसमाथि अपर्याप्त होटल, आवाश तथा अन्य व्यवस्थापनको समस्या छ यहाँ । यद्यपि, यी सबै समस्या र अभावकाबीच पनि विभागले देशभरीका संरक्षण अभियन्ताहरुको सम्मेलन गर्न दार्चुलालाई रोजेको छ । मुलुकका कान्छा संरक्षण क्षेत्रहरुमध्येको एक अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा यो वार्डेन सम्मेलन आयोजना गरिनुले राम्रो सन्देश मात्रै दिएको छैन, धेरै आशा पनि पलाएको छ ।
फर्किएर हेर्दा शहीद गोविन्द गौतम
कञ्चनपुर, फागुन २६ - आजभन्दा ठीक एक वर्ष अगाडि पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाको चुनावमा विजयी भएपछि कार्य समितिका पदाधिकारीहरु बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदानमा व्यस्त थियौँ । त्यसदिन पनि एकिृत नेकपा माओवादी पार्टी कार्यालयले बधाई तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
संविधान पुनर्लेखन : गाँठी नियत यो हो
वि. सं. २००४ मा आरम्भ भएको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक एउटा ठोस प्रावधान राखियो २०४७ को संविधानमा – धारा १२६ । शाह, राणा, फेरि शाह राजाको पूर्ण अधिनमा चलेको नेपाल राष्ट्रको सत्ता पहिलो चोटी ‘जनता’ को हातमा गएको थियो २०४७ मा । त्यसैले धारा १२६ लेखियो त्यसमा ।
किन बनायो भारतले एकतर्फी काठेपुल ?
देशको पश्चिमी सीमा दार्चुला जिल्लाको भूगोलमा पर्ने महाकाली नदीमा भारतीय पक्षले एकतर्फी काठेपुल बनाएको विषयले अहिले धेरैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिसम्म पनि यो विषय पुगेको छ । तर राज्यका संयन्त्रबाट यस विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन ।
देउवाको पुनरागमनले कांग्रेसलाई फाईदा कि घाटा ?
संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवाको पुनरागमनले कांग्रेसलाई घाटा लाग्ला की फाइदा होला भन्ने बहस सुरु भएको छ । तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गरेर सरकारको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेका देउवालाई पार्टी सञ्चालनमा भने असफल भएको आरोप छ ।
भारतलाई नेपालमा चुनौति
२०४६ सालको परिवर्तन, २०५२ मा आरम्भ गराइएको ध्वंसात्मक हिंसाको श्रृङ्खला, २०६२ को दिल्ली सम्झौता, २०६३ को परिवर्तन, सबै भारतको स्वार्थ अनुरुप दिल्लीका शासकहरूकै निर्देशनमा भएका थिए । यो सत्यलाई सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध जानकारी, तथ्य र आधारहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
बीबीसी छाडेकी विद्याकाे हेर्ने कथा अनुभव
एउटा छायाँ हाम्रै छेउमा उभियो । हाम्रो खासखुस एकाएक बन्द भयो । सेतो कमिज र पाइजामा लगाएका दार्हीवाल । राम्रो नेपाली नबोल्ने । उनै थिए मदरसाका सचिव हिफिजुर रहमान । हामीले फेरि चिया थप्यौं । अघिसम्मका हाम्रा आशंकालाई उनले क्षणभरमै मेटाइदिए । उनले सजिलै अनुमति दिए । क्यामरासहितका सरजाम बोकेर भोलि विहानै मदरसा पुग्ने तय भयो ।
नयाँ सिल्क रोड: चीन र भारतका स्वार्थबीच नेपाल कहाँ ?
दक्षिण एसियामा सन् १९९१ देखि नै भारतको व्यापार विस्तार र कनेक्टीभिटीको योजना धेरै सफल हुन सकेन । तिनै छिमेकी मुलुकमा चिनियाँहरुको आर्थिक रुपले राजनैतिक विश्वासपन देखियो, त्यसैले पनि भारतलाई अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना हुन गयो ।
प्रचण्डलाई सजिलै मिल्ला र एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष पद !
माओवादीमा ४७ सालपछि आएका नेता कार्यकर्ता धेरै छन् भने एमालेमा प्रचण्ड भन्दा पनि पाका, धेरै योगदान गरेका पुराना नेता कार्यकर्ताको संख्या ठूलो छ । प्रचण्डले उनीहरुको योगदानको मूल्यांकन गर्नेछन् भन्ने आधार के हुन्छ भन्ने निश्चित नभै एमालेको ठूूलो पंक्तिले प्रचण्डलाई सहज हिसावले स्वीकार्न कठिन छ ।
बन्दी चेतनाको ‘जाँच प्रयोग’
“यहाँ अहिले हामी ६ सय ६८ जना छौं” – एक परिचित युवा बन्दीले सुस्तरी कानमा भने । राणाकालमा बनेको दुईतले एउटा भवन नजिकै ठाउँ–ठाउँमा चिराचिरा परेर कमजोर हालतमा उभिएको थियो । त्यसकै कापमा एउटा सानो गल्ली जस्तोमा चिया पाकिरहेको थियो शायद, बन्दीहरु त्यतैबाट तातो चियाका गिलास लिँदै निस्किरहेका थिए ।
नेपालमा चीनको स्वार्थ
कैयौँ पटक ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि’ चीनले सहयोग गर्ने भन्ने गरिएको छ बेइजिङ्गबाट । कूटनीतिक दृष्टिले यो अत्यन्तै गम्भीर अभिव्यक्ति हो । यसको अर्थ नेपालको सर्वभौमसत्ता गुम्ने र नेपालको अस्तित्व नै नरहने खतरा छ भनेर चीनले विश्लेषण गरेको हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
एक दशक अगाडि अलि कम र अहिलेको दशकमा एकदम धेरै सुनेको रोग क्यान्सर हो । शरीरको विभिन्न अंगहरु फोक्सो, आन्द्रा, कलेजो, पाठेघर, स्तनलगायतमा क्यान्सर भए जस्तै आँखामा पनि क्यान्सर हुन्छ । अरु क्यान्सरमा भन्दा यो क्यान्सर हुने जोखिमयुक्त कारक तत्वहरु फरक छन् ।
ओलीका अघिल्तिर कति धेरै अवसर ?
बोले अनुसार काम थाल्ने हो भने वाम गठबन्धनको सरकारका सामु चुनौती थोरै र अवसरहरु कता हो कता धेरै छन् । अब बन्ने सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर विकासलाई तल्लो तहसम्म पुर्यासउने संरचना तयार छ । स्थानीय तहको चुनावपछि विकासलाई नागरिकको घर दैलोसम्म पुर्याउने जनप्रतिनिधिहरु चुनिएर अहिले काममा छन, तर देखाउने काम नपाएर कामका अवसरको खोजीमा छन ।
चुनाव सम्पन्न गराउनु ठूलो उपलब्धि : देउवा
मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि जनताको सरोकारका विषयलाई केन्द्रमा राखेर निर्णयहरु भएका छन् । विशेषगरी स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरु नियन्त्रण गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यादेश जारी गरिएको छ । जनताको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने चिकित्सा शिक्षा व्यापारको विषय होइन ।
लभ गर्ने फर्मुला
बिहे नभएकाले त लभ गरे गरे । तर बिहे गरेका, घरभरी छोराछोरी भएकाहरु समेत लभ गरि हिँड्छन् । श्रीमानको आँखाकान छलेर श्रीमतीले, श्रीमतीको आँखाकान छलेर श्रीमानले लभ गरेर हिँडेको तपाईं हामीले धेरै ठाउँमा देखेभोगेकै हो क्यारे । लभ पर्न केही न केही त जुर्नुपर्यो । कि मन मिल्नुपर्यो ।
‘प्याडम्यान’ले सम्झाएको महिनावारीकाे अवस्था
अक्षयले धेरै अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, भारतमा ८२ प्रतिशत महिलालाई महिनावारीका क्रममा प्रयोग गरिने स्यानिटरी प्याडबारे थाहा नै छैन । तीमध्ये केहीलाई यसबारे थाहा भएर पनि प्याड किन्नका लागि पैसा छैन ।
​ओली र मोदीको बैगुनी माया : अरुलाई के हो के ? प्रचण्डलाई छायाँ !
काठमाडौं, माघ २० –भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालमा हुन लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्माको अवस्था अहिले ठ्याक्कै यस्तै छ — माया बैगुनी, नभई नहुनी ! चर्चा थालौं, भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणको प्रसंगबाट । स्वराजको दुई दिने नेपाल भ्रमण सकिए पनि उनको भ्रमणलाई लिएर सुरु भएको टिका टिप्पणी सकिएको छैन । उनको भ्रमणलाई कसैले बेमौसमी भनेका छन् ।
स्वराजको नेपाल भ्रमण र महाभारतको लाक्षागृह
कौरबहरुले पाण्डुको बंश नास गर्न वारणावतको लाक्षागृहमा आगो लगाउँदा भाउजु र भतिजालाई काका बिदुरले सुरुंग खनेर गुप्तरुपले बचाएका थिए । तर अहिले बन्दै गरेको काठमाडौंको लाक्षा गृहमा निकट भविष्यमा आगो लाग्दा के.पी. ओलीलाई सुरुंगबाट निकाल्न कुनै बिदुर जन्मेको देखिँदैन । त्यसमाथि मोदी बरु धृतराष्ट्र हुन सक्लान्, तर के.पी. ओली त युधिष्ठिर होईनन् नि !
हिजोआज धेरै महिलाले महिनावारीको बेलामा कपडाको सट्टामा स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्छन् ।गाउँका महिलाले यसको धेरै प्रयोग नगरे पनि सहरमा सबै महिलाको भरपर्दो सामान हो, प्याड । प्याडले महिनावारीको समयलाई सजिलो र सरल बनाउँछ, प्रयोग गर्न जानेन भने यसबाट सुविधा हैन असुरक्षा धेरै हुन्छ । महिलाहरुले स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्दा जब सम्म भिजेको हुँदैन तब सम्म फेर्दैनन् तर यो असुरक्षित हो ।
सुदूर नामले राज्यबाटै दूर पारिएको प्रदेश ७ को नाम के राख्ने ?
कैलाली, माघ १५ –सुदूरपूर्व नरहेको देशमा सुदूरपश्चिम नाम राखेर सुदूरपश्चिमलाई दूरको क्षेत्र बनाइएको छ । मानसखण्डसँगै, डोटी, सुन्दराञ्चल, खप्तड कञ्चन, अपी सैपाल, सेती–महाकालीलगायतका नामहरु प्रदेशको नामाकरणका लागि विभिन्न सस्कृतिविद्हरुले प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।
​व्यंग्य — उसै त देउवा ! नदिएर सुख !!
देउ बा अर्थात दिने बा । जे मागेपनि दिन सक्ने बा । देउ पनि भनिरहन नपर्ने, खुरुखुरु दिइरहन सक्ने बा । दानी स्वभावका बा । देउ बाको जस्तै गुनिलो स्वभाव छ, देउवामा पनि । आफ्नो चुरीफुरी भएको बेला हातमा दिन सक्ने जे छ, त्यही दिने हो । त्योबेला प्रजातन्त्र थियो, राजालाई दिए । अहिले मनपरीतन्त्र छ, कहिले कार्यकर्तालाई दिन्छन्, कहिले अरु नागरिकलाई ।
देउवा सरकारको निर्णय खारेज होला ?
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा कांग्रेस यसअघि कहिल्यै उदार भएन । एमालेले वृद्धभत्ता वितरण थालेको भन्दै कांग्रेस नेताहरु बिरोध गर्थे । तर अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको एउटा निर्णयबाटै देशलाई चालू आर्थिक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको छ । वृद्धभत्ता दिने निर्णय खारेज गर्न भने ओली सरकारलाई समस्या हुन सक्छ ।
म्युचुअल फण्डको लगानी : दुवै हातमा लड्डु
यो हप्ता (माघ २ गते) सिआइबिएल क्यापिटलले एक अरब रुपैयाँ संकलन गर्न अघि सारेको सिटिजन म्युचुअल फण्ड माघ ७ गते बन्द हुने सम्भावना छ । माघ २ गतेकै दिन एनआईसी एसिया क्यापिटलले पनि एनआइसी एसिया ग्रोथ फण्डको १ अर्ब रुपैयाँका १० करोड कित्ता युनिट (शेयर) बजारमा ल्याएको छ ।
मधुमेह भएका बिरामीले मृगौला परीक्षण नगराए के हुन्छ ?
रगतमा चिनीको मात्रा बढी हुनु चिनी रोग हो । यसलाई डायबेटिज, मधुमेह वा सुगर रोगको नामले चिनिन्छ । मधुमेहका जटिलताहरुमा आँखा बिगार्नु, मुटु, नसा र मृगौला बिगार्नु पर्छन्, यसलाई मधुमेह सम्बन्धि मृगौला रोग भनिन्छ ।
कांग्रेस र मालेको गीर हान्ने खेल : चौका, छक्काको सट्टा ‘हल्ला’ !
-यो त उबेलाको कुरा । अहिले गीर हान्ने खेल सबैले बिर्सिसके । त्योबेला कांग्रेस र माले भन्दै चरिमारेटार स्कुलको मैदानमा कुद्नेले पनि बिर्से । माघे संक्रान्तिमा हातमा लारी बोकेर ठूलो पाटा खोज्दै हिँड्नेले पनि बिर्से । खेल्नेले पनि बिर्से, लेख्नेले पनि बिर्सन लागे ।
छाउ हुँदा शौचालयको बास गर्नुपरेकोे त्यो क्षण !
पछिल्लो दिन म गोठमा बस्न सकिनँ । आमाले भन्नुभयो, ‘अनि कता जान्छेस ? जसरी पनि ६ दिन त बस्नै पर्छ ।’ घरभन्दा टाढाको गोठमा जानु भन्दा घर नजिकैको शौचालयमा बस्न मलाई सजिलो भयो । शौचालय सानो थियो । खुट्टा तानेर सुत्न नमिल्ने थियो । त्यो शौचालयमा कसरी रात बिताउने ? आमाले मलाई पराल दिनुभयो । त्यो परालमाथि ओछ्यान लगाएर सुतेँ ।
बिर्सने रोग (डिमेन्सिया) के हो ?
आफैले राखेको सामान एकछिनपछि कहाँ राखियो, बिर्सियो, कहिँ जान निस्किएको बाटो बिर्सने, एकैछिन अगाडि के भएको थियो यादै हुँदैन । यो समस्या धेरैलाई हुन्छ जसलाई मेडिकल भाषामा डिमेन्सिया भनिन्छ, बिर्सने रोग ।
चिसो बढ्यो, जोगिन के गर्ने ?
तापक्रम घट्दै गएपछि हाम्रो आनिबानीमा पनि परिवर्तन हुन्छ । शरीरमा लुगाका मात्रा थपिन्छन् । रुघाखोकी, छाती दुख्ने समस्याले दुःख दिन थाल्छ ।
प्लेनको टिकट किन्ने पैसा नभएपछि विश्वकप खेल्न स्थलमार्गबाट पाकिस्तान पुग्दाको दुःख
हामीलाई काठमाडौं छोड्ने बेलामा नै शंका लागेको थियो, स्थलमार्गबाट हुन लागेको पाकिस्तानसम्मको चार दिने यात्रामा दुख पो पाइने हो कि भन्ने ।
नवनिर्माण महाअभियानमा कृषि क्रान्ति कसरी ?
वास्तविक कृषि उत्पादन भइरहेको भूमि २६लाख ५४ हजार ३७ हेक्टर मात्र छ । कृषि उत्पादनमा रहेको यो भूमिमा ३३ लाख भूस्वामीहरू रहेका छन र त्यो व्यवसायीक उत्पादन हुन नसक्ने गरी १ करोड २२ लाख टुक्रामा विभाजित छ ।
दिल्लीमा मधेसीले लगाएका गुन धोबिघाटमा उभिएर तिर्न पाउँदा
चुनावलगत्तै भारतको हैदरावाद जाने अवसर आयो । काठमाडौंबाट नयाँदिल्लीसम्म एउटा जहाजमा र त्यहाँबाट फेरि अर्को जहाजमा हैदरावाद पुग्नुपर्ने । साथमा अफिसकै साथी विकास थिए । दुवैजनालाई राम्रो अंग्रेजी र हिन्दी भाषा नआउने । विकास मेरो भरमा, म उनको भरमा निस्केका थियौं ।